dawei - Free Slideshow Maker
ဒီဆိုက်ကို ၁၃၇၃ ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်ပြည့်နေ့(၉.၁၀.၂၀၁၁)နေ့တွင်တည်ထောင်သည်. Powered by Blogger.
ရှင်မျှော်စေတီ ၊ လောင်းလုံးမြို့နယ် ၊ ကြက်လွှတ်ရွာ တွင်တည်ရှိပါသည်။
ရှင်ပင်ခရုစေတီ ၊ တနင်္သာရီတိုင်း ၊ထားဝယ်မြို့ ၊ ကရပ်ပြင်ရပ် တွင်တည်ရှိသည်။
ရှင်တောင့်ပုံစေတီတနင်္သာရီတိုင်း၊ သရက်ချောင်းမြို့နယ်၊ သရက်ချောင်းမြို့တွင်တည်ရှိပါသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားတွင် ယမန်နေ့က ပြုလုပ်သည့် မဲခေါင်ဒေသတွင်း ၆ နိုင်ငံ အသက် ၂၁ နှစ်အောက် ဖိတ်ခေါ်ဖလား ဗိုလ်လုပွဲတွင် မြန်မာပရိသတ်တချို့၏ အားပေးပုံကို Soccer Myanmar/Facebook တွင် အထက်ပါအတိုင်း တွေ့ရသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ တဦးကို ပုဆိုးခါးတောင်းကျိုက်၊ မင်ကြောင်ပုံ၊ အလံတို့ဖြင့် တွေ့ရသည်။
ကျမ တနင်္သာရီကိုလာရတာအရမ်းမှန်သွားပြီဒီကလူတွေကိုကြည့်ပြီးတခြားမြို့တွေကလူတွေပါ သတ္တိတွေကူးသွားမယ်
ထားဝယ် ရေး ကားလမ်းပိုင်းမှာ ဂိတ်ကြေးတွေကောက်နေတာဘာအတွက်လဲ
ထားဝယ်-ရန်ကုန် ကားလမ်းအကြားရှိ ထားဝယ်-ရေးလမ်းပိုင်းတွင် ခရီးသည်တင်ကားများနှင့် ကုန်တင် ကားများကို ကြားဖြတ်စစ်ဆေးရေးဂိတ် တိုးလာသဖြင့် ဂိတ်ကြေး ပိုပေးနေရသည်။
“ရေဖြူဂိတ်၊ ကလိန်အောင်ဂိတ်၊ မလွှဲတောင်ဂိတ်နဲ့ ရေးမြို့အဝင်ဂိတ်ကြီးတွေကို
ဂိတ်ကြေးပုံမှန်ပေးနေရပေမယ့် အခုကဂိတ်ကြီးတွေကြားက လုံခြုံရေး ကင်းစခန်းတွေရော လှည့်ကင်းနဲ့ဆုံတဲ့အခါ ကားကိုရပ်ပြီး ပိုက်ဆံ ပေးနေ ရတယ်” ဟု ရွှေလီအိပ်စပရက်စ် ကားသမား ဦးတင်လေးက ပြောသည်။
မှန်လုံခရီးသည်တင်ကားတစ်စီးတစ်စီးလျှင် ကျပ် ၁၀၀၀ ပေးနေရပြီး တခြားခရီးသည်တင်ကားငယ်များက ကျပ် ငါးရာ ပေးရသည်။ ၁ဝ ဘီးကုန်တင်ကားများကို ကျပ်တစ်ထောင်အထက် ပေးရသည်ဟု ကောင်းသစ်စံ ခရီးသည်တင် ကားမှ ဦးတင်ထွန်းက ပြောသည်။
“ပုံမှန်က ဂိတ်ကြီးကိုရောက်ရင် အောက်ဆင်းလမ်းလျှောက် မှတ်ပုံတင်စစ်တယ်၊ အခုတော့ ဘာဂိတ်မှမရှိ ဘဲနဲ့ ရဲ၊ ပြည်သူ့စစ်နဲ့ စစ်တပ်ပေါင်းပြီး ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက် နေ့က အထူးစစ်ဆေးရေးဆိုပြီး ဂိတ်ကြီးမရောက်ခင် ကြားနေရာ တွေမှာလည်း စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်တယ်” ဟု ကားသမားတစ်ဦးက ပြောသည်။
Posted by ကန်းရိုးတန်းဆည်းဆာ at 9:34 AM0comments
ထားဝယ်စီးပွားရေးဇုန်ဖော်ဆောင်ရန် ဒီရေတောဧက ၆ဝဝဝ ကျော် ရှင်းလင်းလျှင် မုန်တိုင်းများ ဝင်ရောက်နိုင်ဟု ပညာရှင်များသုံးသပ်
နဘူးလယ်ချောင်းနှင့် မောင်းမကန်ကြားတွင် တည်ရှိသော ဒီရေတောဧက ၆ဝဝဝ ကျော်အား အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းအတွက် ရှင်းလင်းပါက မုန်တိုင်းများ ဝင်ရောက်နိုင်ရုံမျှမက အဘက်ဘက်က ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း မိုးလေဝသဇလဗေဒပညာရှင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်များက သတိပေးပြောကြားသည်။”ဒီရေတောတွေ ပြုန်းတီးရင် မုန်တိုင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတင်မကဘူး၊ ကမ်းရိုးတန်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အင်ဒို၊ ဗီယက်နမ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွေမှာလည်း ဒီရေတောတွေရှိတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဆိုရင် ဒီရေတောတွေပြုန်းတီးခဲ့လို့ မုန်တိုင်းတွေ ခဏခဏဝင်ရောက်တယ်။ အခုဆိုရင် ဒီရေတောတွေ ပြန်စိုက်လာလို့ မုန်တိုင်းတွေ သိပ်မဝင်တော့ဘူး။ မုန်တိုင်းတွေ မဝင်လာနိုင်အောင် ဒီရေတောတွေက တားဆီးပေးထားတာပါ။ စီးပွားရေး ဦးစားပေးလုပ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်ရင် လုံးဝသဘော မတူဘူး” ဟု သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင် ဦးအုန်းက ပြောသည်။
Posted by ကန်းရိုးတန်းဆည်းဆာ at 11:58 PM0comments
စက်မှုထွန်းကားမှုကြောင့် ဒေသခံတွေ နှစ်ခါပြန် ကိုလိုနီဘဝကို ခံစားရဟု Green Bike အဖွဲ့ဆို
Green Bike (အစိမ်းရောင်စက်ဘီးစီး) ၁၄ ဦးအဖွဲ့သည် သဘာဝပတ်ဝန်ကျင်းထိန်းသိမ်းရေး ခရီးစဉ်တခုအနေဖြင့် ရန်ကုန်မှ ထားဝယ်သို့ ဇန်န၀ါရီလ ၂၅ ရက်နေ့မှ ၃၀ ရက်နေ့ထိ (၅) ရက်ကြာ ခရီးစဉ်တခု သွားခဲ့သည်။
ရေဖြူမြို့နယ်၊ ရေပုံးရွာတွင် ထမင်းစားအနားယူနေစဉ်
ခရီးစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူ ကိုသက်နိုင်က “ထားဝယ်မှာရှိတဲ့ လူထုအခြေပြု လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေကို အားပေးချင်လို့နဲ့ သူတို့နှင့်အတူ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ပြချင်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို လူထုတွေကို အသိပေးချင်တယ်။ ပြီးတော့ ဒေသခံတွေရဲ့ ရင်ဖွင့်သံတွေကို နားထောင်ချင်တယ်” ဟု ရှင်းပြခဲ့သည်။
၎င်းက ဆက်လက်ပြီး “သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဟာ လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကျနော်တို့ မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ထားခဲ့မလား၊ ဖြုန်းခဲ့မလားဆိုတာ သီလ၊ သိက္ခာ၊ သမာဓိရှိရှိနဲ့ တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ ကျနော်ပြောချင်တာက စက်မှုထွန်းကားလာလို့ ကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်မှုတွေ များလာတယ်။ လိုအပ်ချက်တွေလည်း များလာတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒေသခံတွေအနေနဲ့ ကိုလိုနီလက်အောက်ကို နှစ်ခါပြန်ရောက်နေရသလိုမျိုး ခံစားနေရတယ်” ဟု ထားဝယ်လူထုအသံကို ရှင်းပြခဲ့သည်။
Posted by ကန်းရိုးတန်းဆည်းဆာ at 11:50 PM0comments
မော်လမြိုင်တံတား ၂၄ နာရီဖွင့်ပြီ
ခြင်းကြောင့် ရန်ကုန် -ထားဝယ် အဝေးပြေးကားများအနေဖြင့်မုတ္တမဘက်ကမ်းတွင်ညအိပ်ရပ်နားရန်မလိုတော့ဘဲတောက်လျှောက်သွားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် “နှင်းပွင့်”အဝေးယာဉ်လိုင်းဖြင့် ကဏ္ဍသစ်တစ်ရပ်ဖွင့်ခဲ့သည့် ထားဝယ်- ရန်ကုန်-ထားဝယ်အဝေးပြေးကားများပြေးဆွဲခဲ့ပြီး၊မုတ္တမတံတားတည်ဆောက်ပြီးစီးသည့်နောက်တွင်အချိန်ကန့်သတ်ချက်ဖြင့်တံတားဖွင့်၊ပိတ်ခြင်းကြောင့်ခရီးသွား
များအတွက်အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး၊အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်ပိုင်းသို့ပြေးဆွဲသည့်ယာဉ်လိုင်းများ မုတ္တမတံတားထ်ိပ်တွင်ညအိပ်ရပ်နားကာတံတားဖွင့်ချိန်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြရသည်။ယခုအခါတံတားကို(၂၄)နာရီဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်သဖြင့်ရန်ကုန်- ထားဝယ်ကားများအနေဖြင့် ယမန်နေ့မှစတင်ကာ ထားဝယ်သို့ နံနက်(၉)နာရီခွဲအချိန်တွင်ပင်ရောက်ရှိ
Posted by ကန်းရိုးတန်းဆည်းဆာ at 6:19 AM0comments
နက်ရှိုင်းလှသည့် ပင်လယ်သ မုဒ္ဒရာများထဲမှ ကင်းမွန်များသည် နှစ်စဉ်မုတ်သုံ ရာသီထွက်ပြီး တစ်လခန့်အကြာ အောက်တိုဘာလ ပိုင်းတွင် တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးတန်း ဒေသဆီသို့ သဘာဝ အလျောက် ရောက်ရှိ လာလေ့ရှိကြသည်။
ထိုအချိန်မျိုးသည် မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းဆီမှ ကင်းမွန်ဖမ်းသမားများ အလုပ်ရှုပ်ဆုံးအချိန် ဖြစ်သည်။ တစ်ပတ် ၁၀ ရက်စာအတွက် ရေခဲများ၊ စားနပ်ရိက္ခာများ၊ လောင်စာဆီများကို တင်ဆောင်ပြီး လှေကြီးလှေငယ်များဖြင့် ကမ်းခြေမှ ပင်လယ်ပြင်ဆီသို့ အလျှိုလျှိုထွက်ခွာကြသည့် ကင်းမွန်ဖမ်းလှေများနှင့် မြိတ်မြို့ ကမ်းနား၌ စည်ကားတတ်သည်။
“ကင်းမွန်က လမမြင်မှ ဖမ်းလို့ရတာ။ လပြည့်ကျော် လေးရက်လောက်ဆိုရင် ကင်းမွန်လှေတွေ ထွက်တယ်” ဟု အသက် ၅၀ ခန့် အရွယ်ဦးအောင်သန်းက ပြောသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၀ ခန့်ကတည်းက ကပ္ပလီပင်လယ်
Posted by ကန်းရိုးတန်းဆည်းဆာ at 9:00 AM0comments
“ဟက်ပီး” လို့ မြန်မာလို ထင်ထင်ရှားရှားရေး ထားသည့် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ဖုန်းလိုင်း ကတ်ပေါ်မှ ပါးနှစ်ဖက်မှာ သနပ်ခါးနှင့် အားပါးတရ ပြုံးနေသည့် အမျိုးသမီးငယ်လေး ဖုန်းပြောနေပုံမှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိလှသည်။ သူ့ထက် ပိုပြီးဆွဲဆောင် မှုရှိသည်မှာ သူကြော်ငြာပေးနေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ဖုန်းကတ်ဈေးနှုန်း ပင်ဖြစ်သည်။
“ဒီမှာ (ကော့သောင်း) မြန်မာငွေ ၁၅၀၀ လောက်ပေးရင် ဖုန်းတစ်လုံး ကိုယ်ပိုင်ရတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ရန်ကုန်လို ဆန္ဒပြနေစရာမလိုဘူး။ ဂျာနယ်ထဲမှာ ထည့်ပြောစရာ မလိုဘူး” ဟု ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနှင့် ကယ်ရီဆွဲရင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေသူ ကော့သောင်းမြို့နေ ဦးကျော်လှိုင် က ပြောသည်။
“ဖုန်းကြာကြာပြောသူ စိတ်ကျေနပ်နှစ်သက်စရာ” လို့ မြန်မာလို ရေးထားသည့် ထိုင်းဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်သုံး ဖုန်းများ၏ ဈေးနှုန်းကြောင့် မြန်မာပြည်တောင်ဘက် အစွန်ဆုံးပိုင်းတွင် တည်ရှိသည့် ကော့သောင်းမြို့တွင် လူတိုင်းနီးပါး လက်ကိုင်ဖုန်းများ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း.........
Posted by ကန်းရိုးတန်းဆည်းဆာ at 8:51 AM0comments
Labels: တောင်ပိုင်းဒေသအတွက် တာဝန်
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီကို မမျှော်လင့်သော် လည်း ရအောင်လုပ်ယူမည်ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား...............
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ၌ အနိုင်ရရှိရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရရှိရေးကို
မမျှော်လင့်သော်လည်းရအောင်လုပ်ယူမည်ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၎င်း၏ကော့သောင်း-မြိတ် ခရီးစဉ်အတွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်တွင် မြိတ်မြို့ ဦးစိန်ဂျက် ခန်းမ၀န်းအတွင်း၌ ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်သူများထံမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD အနိုင်ရရှိရန် မျှော်လင့်ပါသလားဟူသော မေးခွန်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထိုသို့ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။...
Posted by ကန်းရိုးတန်းဆည်းဆာ at 2:56 AM0comments
ကလုံးထာ ရေကာတာ စီမံကိန်းအပေါ် ဒေသခံများ ကန့်ကွက်
ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းအတွက် အဓိက ရေအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာမယ့် ကလုံးထာရေကာတာ တည်
ဆောက်မယ့် စီမံကိန်းအပေါ် ရေကာတာရဲ့ ရေနစ်မြုပ်ဧရိယာအတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ ကလုံးထာ ရွာသူ ရွာသားတွေက ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်ခရိုင် ရေဖြူမြို့နယ် တလိုင်းယာကျေးရွာအုပ်စုဝင် ကလုံးထာကျေးရွာမှာ အိမ်ထောင်စု ၁၈၂ စု၊ လူဦးရေ တထောင်ကျော်နဲ့ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ ၉၂၄၀ ဧကရှိပြီး ကွမ်းသီး၊ သီဟိုဌ်၊ ရော်ဘာနဲ့ အုန်းပင် စတဲ့ နှစ်ရှည်ခံသီးပင်တွေကို အများစု စိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ရွာသူရွာသားတွေကတော့ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်ကတည်းက စိုက်ပျိုးလာတဲ့ ဥယျာဉ်ခြံမြေတွေဟာ အခုမှ သီးပွင့်စပြုလာတဲ့အတွက် ရွာနေရာဟောင်းကို မဖယ်ပေးနိုင်ဘူးလို့ ပြောနေကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရွာသူ ရွာသားတွေ အနေနဲ့ တလိုင်းယာချောင်းအတွင်းမှာ တပိုင်တနိုင် ခဲသတ္တုကျင်ပြီး စားဝတ်နေရေးအတွက် ဖြေရှင်းနေရတာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမြင့်ပေ ၃၀၀ ရှိတဲ့ ဒီရေကာတာကို တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် ကလုံးထာ ရွာဟာ ရေအကြီးအကျယ် နစ်မြုပ်နိုင်တဲ့ ဧရိယာအတွင်းမှာ ပါဝင်နေတဲ့အတွက် စီမံကိန်းဖော်ဆောင်မယ့် အီတာလျံ-ထိုင်း ကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ ရွာကို ပြောင်းရွှေ့စေချင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနဲ့ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွက် အဓိက အထောက်အကူပြုမယ့် ရေကာတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မတည်ဆောက်နိုင် ဘူးဆိုရင် စီမံကိန်းတခုလုံး ပျက်သွားနိုင်တယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ရုပ်သံတင်းကြည့်လိုက ဒီနေရာကိုသွားလိုက်ပါ
Posted by ကန်းရိုးတန်းဆည်းဆာ at 6:51 AM0comments
ဒု-သမ္မတဦးဉာဏ်ထွန်း ထားဝယ်စီမံကိန်းကိစ္စ ထိုင်းနဲ့ဆွေးနွေး
တနင်္သာရီတိုင်း၊ ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေးစီမံကိန်းကို အုပ်ချုပ်ခန့်ခွဲဖို့ ထိုင်း-မြန်မာပူးတွဲကော်မတီကို ဒီကနေ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၊ တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေးစီမံကိန်းကို အုပ်ချုပ်စီမံ ခန့်ခွဲ သွားမယ့် ထိုင်း-မြန်မာပူးတွဲကော်မတီကို ဒီကနေ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ပူးတွဲဆောင်ရွက်သွားမဲ့ ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းတွေ ကိစ္စကို မြန်မာ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်းနဲ့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် Yinluck Shinawatra တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနောက်မှာ ပူးတွဲကော်မတီကို တရားဝင် ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ဘန်ကောက်ရုံးက မစုမြတ်မွန်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရနဲ့ ထိုင်းအစိုးရတို့ ပူးတွဲ အကောင်အထည်ဆက်ဖော်သွားမယ့် ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ပါဝင်တဲ့ ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေး စီမံကိန်းတွေကိစ္စကို ထိုင်းအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ဆွေးနွေး ဖို့ မြန်မာ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်းဟာ အင်္ဂါနေ့ ညနေပိုင်းကတည်းက ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့
Posted by ကန်းရိုးတန်းဆည်းဆာ at 3:41 AM0comments
!! တနင်္သာရီတိုင်းသားများ!! ထားဝယ်ရဟန်းငယ် ကမ်းရိုးတန်းဆည်းဆာ ထားဝယ်လူထုအသံ ရွှေဝယ်ပြည် ထားဝယ်သား ကနက်သီရိသားလေး တနင်္သာရီသား D D A ရောင်စဉ်ငြိမ်း ထားဝယ်စီမံကိန်း အနှိုင်းမဲ့အလင်း ရွှေရောင်းမော် ကော့သောင်း အထက ၁ မြိတ် ပုလဲမြေ ကမ်းရိုးတန်းသစ္စာ ထားဝယ်ဓာတ်ပုံများကြီး
!! သတင်းစာ -ဂျာနယ်များ!!မြန်မာ့အလင်းကြေးမုံသတင်းစာရတနာပုံသတင်းစာမိုးသောက်ဂျာနယ်ဈေးကွက်ဂျာနယ်ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်အင်တာနက်ဂျာနယ်လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်ရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာနယ်ဝိကီလိလ်ဗင်းဂျာနယ်အလင်းရနဲ့ဂျာနယ်အလင်းတန်းဂျာနယ်မြန်မာတိုင်းဂျာနယ်မြန်မာပို့စ်ဂျာနယ်The voice ဂျာနယ်Ecovision ဂျာနယ်ဓမ္မဂျာနယ်
!! သတင်းဌာနများ !!သတင်းမီဒီယာကွန်ယက်ဒီဗွီဗီမဇ္ဈိမမိုးမခသျှမ်းသံတော်ဆင့်ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းအစီစဉ်VOAမြန်မာRFAမြန်မာနိရဉ္ဖရာဧရာဝတီရွှေမော်ကွန်းဒေါက်တာလွဏ်းဆွေမြန်မာသတင်းရပ်ဝန်းနစ်နေမန်းဖရီးဒမ်းနယူးဂရုဟစ်တိုင်ဆုံဆည်းရာ
!! ဘောလုံးပွဲဆိုဒ်များ!!ချဲလ်ဆီးချစ်သူများကြိူးကျာနီတို့ဆုံမှတ်မြန်မာဂိုးဘော်လုံးဂိုးသတင်းများဘော်လုံးပေါက်ကြေးခုကန် ခုကြည့် ဘောလုံးဆိုဒ်မြန်မာပရီးမီးယားလိပ်ကမ္ဘောဇအသင်းမန်ယူအသင်းအလင်းတန်းဂျာနယ်မြန်မာတိုင်းဂျာနယ်
!! နည်းပညာဆိုင်ရာဆိုဒ်များ!!စောဇော်မင်းထွန်းကိုဇော် ၃၅၇သတ္တမ နည်းပညာရပ်ဝန်းနည်းပညာ စာမျက်နှာကိုစေတန် ဂေါ့ဒ်မြန်မာ အိုင်တီ ပရို ကိုစိုးမင်း ကြယ်စင်မင်း ရဲ့ မှတ်စုများအရာတော်မြေမြန်မာ ဖိုတိုရှော့ နှင့် ဂရပ်ဖစ် အဖွဲ့IT မောင်မောင်နည်းပညာ ရှဲရင်းကျွန်တော် မှတ်စုစာအုပ်မြန်မာအိုင်တီလောက ဖွံ့ဖြိုးမှု့မြန်မာ ကွန်ပျူတာညမီးအိမ်ရွှေပြည်သူ
!! ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ!!နိုက်တင်ဂေးဂျာနယ်မြန်မာ့ဆေးမြီးတိုယမုံနာဆေးခန်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမွန်သက်ပန် ဆေး၁
!! ဘာသာရေးဆိုဒ်များ!!မြတ်ဗုဒ္ဓကို ကြည်ညိုခြင်း ဗုဒ္ဓသာသနာအကြောင်း သူတော်ကောင်းတရားများဗုဒ္ဓ ဓမ္မ သံဃာ့ သင်းကြီးဓမ္မလက်ဆောင်ဓမ္မအလင်းရောင်ဓမ္မရနံ့ ဓမ္မအရိပ်သစ္စာအလင်းဓမ္မလင်းရောင်ခြည်ဓမ္မဌာနေဓမ္မဟေ၀န်ဓမ္မစကားဓမ္မမေတ္တာဓမ္မကုန်းမြေဓမ္မဒါန ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း(စင်္ကာပူ) ဓမ္မပန်းခင်း ဗုဒ္ဓစာကြည့်တိုက်ဓမ္မဥပဒေပြန့်ပွားရေးဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား)အရှင်လောကနာထဝိမုတ္တိရသမြန်မာထေရ၀ါဒမနက်ဖြန်
- The best English4You
( ၇ ) ရက်အတွင်းအမြန်အဆီချနည်း....
ကျွန်မရောက်ခဲ့တဲ့ ထားဝယ်မြို့ (နိုင်းနိုင်း စနေ)
မြိတ်မြို့ပေါ်က ဆိုင်ကယ်များလိုင်စင် ပြုလုပ်ရန်အတွက် အခက်ခဲကြုံတွေ့နေရ
ထားဝယ် – မြိတ် မီးရထားလမ်း စီမံကိန်းကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်း
မိမိနှာခေါင်းကို မိမိပါးစပ်ဖြင့် ကိုက်ပြသူ
ထားဝယ်သတင်း (55) ပြည်တွင်းသတင်း (26) ဆောင်းပါး (15) ထား​ဝယ်​သတင်း (12) ထူးဆန်းဖြစ်စဉ်များ (3) မှတ်တမ်းဗွီဒီယို (3) သတင်း (3) ပြည်ပသတင်း (3) ကွန်ပျူတာပြုပြင်နည်း (2) ပိန်နည်းများ (2) Norton™ AntiVirus 2012 19.1.1.3 (110. Mb) (1) Upload တင်နည်နှင့် Download လုပ်နည်း (1) software (1) ကချင်ပြည်နယ်မှ သဘာဝအလှများ (1) ကမ္ဘာကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့သော၅၅ပေရှည်မြွေကြီး (1) ကျွန်မရောက်ခဲ့တဲ့ ထားဝယ်မြို့ (နိုင်းနိုင်း စနေ) (1) ငါးထောင်တန်ဖုန်းမျှော်လစ်ချက်မကုန်သေး (1) စင်ကာပူဗီဇာကို အလုပ်သမားကတ်ပါမှ ထုတ်ပေးတော့မည် (1) စီမံကိန်းဗွီဒီယို (1) တကယ်ပြောင်းရတော့မယ်ဆိုပါလား (1) တည်းဖြတ်နည်း (1) ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်း သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ (1) ထားဝယ်ဟင်းလျှာ (1) ထားဝယ်အထူးစီးပွါးရေးဇုန်နှင့်မြန်မာဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မူအပိုင်း(၇) (1) ထိုင်းသတင်း (1) ထိုင်းရေဘေးမြန်မာသံဃာတို့ကိုယ်တွေ့ကြုံ (1) ဒလမြို့ တော်ကြီး စီမံကိန်း စတုတ္ထပိုင်း (1) နည်းပညာ (1) ပုဂံဘုရားများပြုပြင်ရန်ဂျပန်ကူညီမည် (1) ဖုန်းတစ်လုံး ကျပ်ငါးထောင်ဖြင့် မကြာမီ ရောင်းချပေးတော့မည် (1) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တူသူတွေ့ပြီ (1) မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှကျောချမ်းဖွယ်အရုပ်ကျွန်း (1) သဘာဝကပေးတဲ့လက်ဆောင် လူတွေပေးတဲ့ဒုက္ခများ (1) သရဲအကြောင်း (1) အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ရောင်းသောနိုင်ငံစုံကားပြပွဲပြုလုပ်မည် (1) ဒေါင်းလော့များ (1) ရေခဲရေဆိုးကျိုးများ (1) ရေကြီးနေသောထိုင်း (1) လေယဉ်မောင်းလိုင်စင်ရခဲ့တဲ့ လက်မရှိသောမိန်းကလေး (1) မြန်မာ VS ဗီယက်နမ် သရေ (1) မြန်မာသတင်း (1) မြန်မာပြည်ဖုန်းတွေမှာအင်တာနက်သုံးနည်း (1)
ထားဝယ် ရေး ကားလမ်းပိုင်းမှာ ဂိတ်ကြေးတွေကောက်နေတာဘ...
Copyright © 2011 ကမ်းရိုးတန်းဆည်းဆာ | Powered by Blogger